Antony 7 hampiharana ny fanaraha-maso ny antso sy ny analytics | Martech Zone
Antony 7 hampiharana ny fanaraha-maso ny antso sy ny analytics
Mpitsidika iray no mahita ny tranokalanao mampiasa teny lakile mahazatra ao amin'ny orinasao. Tonga eo amin'ny pejin-tranonao izy ireo amin'ny alàlan'ny finday avo lenta, manokatra ny pejy fandraisana ary mahita haingana ny nomeraon-telefaonanao. The mifandray tsara ny isa hiantso ho azy rehefa tsindrio ny nomeraon-telefaona. Ny prospect dia miresaka amin'ireo ekipanao miditra manan-talenta izay manidy azy ireo haingana.
Mampalahelo fa tsy vaovao mahafinaritra izany. Ny nomeraon-telefaoninao dia mafy-kolaka izany ao amin'ny maodelin-tranonkalanao. Vokatr'izany dia tsy fantatrao izay niavian'ny mpitsidika sy ny fampielezan-kevitra, raha misy, mba hilazana ny fivarotana mihidy. Raha nametraka vahaolana amin'ny fanarahana antso ianao dia hanana tantara hafa be dia be ianao. Tokony hiditra amin'ny tranokalanao ilay mpampiasa ary misy nomeraon-telefaona vaovao azo novokarina nifototra tamin'ny teny lakile tamin'ny fampielezan-kevitra fikarohana. Mety niantso ilay laharana ilay olona, ​​tokony ho voasoratra an-tariby ilay antso Analytics, ary ny varotra dia tokony ho nanondro ny teny fanalahidy sy ny fikarohana.
Raha ity dia haitraitra tsy voatery ho an'ny orinasa orinasa taona maro lasa izay, antsoy ny fanaraha-maso sy Analytics dia vahaolana mora vidy ankehitriny. Ampifanaraho amin'ny fihetsika finday avo lenta ny vidiny - izay mirongatra tampoka - ary tonga ny fotoana hampiasanao ity teknolojia ity! Aza mino ahy? Ireto misy antontan'isa 7 manohana ny fananganana fanaraha-maso antso:
Fitomboan'ny fikarohana finday vinavinaina hiteraka antso 73 miliara ho an'ny orinasa amin'ny taona 2018
61% amin'ny valin-kafatra nanaovana fanadihadiana no nilaza kitiho-i-antso no lakile amin'ny dingana fividianana fiantsenana
70% amin'ireo mpikaroka finday no mampiasa click-to-call hifandray amin'ny orinasa mivantana valin'ny fikarohana
79% n'ny mpampiasa finday avo lenta no mampiasa fikarohana eo an-toerana, 89% indray mandeha isan-kerinandro, 58% farafaharatsiny isan'andro
57% ny olona miantso satria te hiresaka a tena olona
Nahazo 19% ny orinasa miakatra amin'ny habetsaky ny antso isan-taona
mihiditra miova ny antso an-tariby 10-15 heny mihoatra ny fitarika amin'ny tranonkala
As CallRail apetrako, efa any amin'ny telefaona ny vinavinanao. Ny fanontaniana dia hoe miantso anao izy ireo na tsia ary manara-maso izany ianao.
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i CallRail
Tags: fanaraha-maso antso an-tsoratramiantso analyticsmiantso lalambyfanaraha-maso antsocallrail
Jan 4, 2016 ao amin'ny 11: 38 AM
Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity dia lasa mazava tsara ny zava-drehetra :) Misaotra anao tamin'ny lahatsoratra. Mahavariana ny antontan'isa, ary na dia tsy mahafantatra na inona na inona momba ny fanaraha-maso antso aza, dia mahatonga anao hieritreritra ny tombontsoa azony izany. Toa fanapahan-kevitra lehibe ny Callrail, ary misy mpamatsy hafa toa an'i Avidtrack, Ringostat, Dialogtech.